Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Suudaan » Ruushku wuxuu rabaa saldhigga badda ee Suudaan, Suudaanna waxay rabtaa lacag
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Investments • News • Dadka • Wararka Ruushka • Wararka Suudaan • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Sida ay sheegayaan wararka qaar, Suudaan waxay hadda doonaysaa magdhow maaliyadeed oo aad iyo aad u sarreeya iyo in la kordhiyo kaalmada maaliyadeed ee Ruushka si loogu oggolaado saldhigga ciidamada badda Ruushka ee xeebaha Suudaan.
Suudaan iyo Ruushka ayaa kala saxiixday heshiis ku saabsan furitaanka saldhigga ciidamada badda ee Ruushka ee Suudaan December 2020.
Saldhigga saadka ciidamada badda waxaa loogu talagalay in lagu sameeyo dayactir, buuxinta sahayda iyo shaqaalaha maraakiibta badda Ruushka si ay u nastaan.
In aan ka badnayn afar markab oo kuwa dagaalka ah oo Ruushku leeyahay ayaa joogi kara saldhigga ciidamada badda, heshiiskii hore ayaa dhigaya.
Wakiilka Madaxweynaha Ruushka ee Bariga Dhexe iyo Afrika ayaa ku dhawaaqay in wareeg cusub oo wada xaajood ah uu dhex maray saraakiisha milatariga Ruushka iyo Suudaan oo ku saabsan furitaanka saldhigga ciidamada badda ee Ruushka ee xeebta Badda Cas. Wasiir ku xigeenka gaashaandhigga Ruushka ayaa ka qayb qaatay wadahadalada markan.
“Iyaga (saraakiisha difaaca) ayaa wada -xaajood yeeshay wasiir ku -xigeenka difaaca ayaa halkaas booqasho ku yimid,” ayuu yiri wasiir ku xigeenka arrimaha dibedda Mikhail Bogdanov Isniintii, isaga oo aan sheegin faahfaahinta wada -xaajoodka.
Sida ay sheegayaan warar hore, Ruushka iyo Sudan ayaa saxiixay heshiis ku saabsan saldhigga saadka saadka badda ee Ruushka ee Suudaan horraantii Diseembar 2020.
Sida ku cad dukumintiga, shaqaalaha xarunta ciidanka badda waa inaysan dhaafin 300 oo qof.
In aan ka badnayn afar markab oo kuwa dagaalka ah oo Ruushku leeyihiin ayaa joogi kara saldhigga ciidamada badda, dukumintigu wuxuu qeexayaa.
Madaxa Guud ee Ciidanka Sudan Muhammad Othman al-Hussein ayaa bishii June sheegay in Sudan ay “ku guda jirto dib u eegista heshiiskii ay kala saxiixdeen dowladii hore ee Sudan iyo Ruushka ee ku saabsanaa mashruuca milateri ee Ruushka ee xeebta Badda Cas ee Suudaan. ”
Garsoore federaal ah ayaa joojiyay tallaalkii United Airlines ee COVID-19 ...
Booliiska ayaa joojiyay argagaxisadii Mombasa, Kenya, ma ...
Miyay tahay in xubnaha UNWTO tikidhada Marrakesh hadda? Maya ...
Brandt waxa uu abuuraa iibiye qalab caalami ah...
Kenya ayaa soo afjartay bandowgii dheeraa ee fiidkii ilaa waaberigii COVID-19
Isagoo ka jawaabaya Xeerka Cimilada Degdegga ah ee Cas
Rotterdam Holland waa $4.1 milyan...
Cusboonaysiinta cusub ee Anguilla ee borotokoolka gelitaanka safarka oo bilaabmaya...
Glass Lewis waxay iskaashi la leedahay Arabesque si kor loogu qaado ...
Golaha Wasiirada Talyaaniga ayaa ansixiyay tallaabooyin lagu xoojinayo...
Paris - Singapore: Duulimaadkii Air France ee tallaalka ...
Musharixiinta siyaasadda ayaa heli doona $ 2,900 oo lacag la’aan ah ...
Tallaalka Dhiirrigeliyaha J&J COVID Hadda Wuxuu Helay Iftiin Cagaaran
Shabakadda Dalxiiska Adduunka Hoggaaminta Cutubka Bangladesh ...
Seychelles waxay ka yaabisay khubarada safarka raaxada ee Spain
Diyaarad ay saarnaayeen 6 qof ayaa ku baaba'day ...